Gaa Semalt gaa Google Top
Oghere dị n'ịntanetị na-ekwupụta iwu nke ya. Businesszụ ahịa na isntanetị adịghị ka ịme azụmahịa na ụwa n'ezie. Ọ dị mfe ma sie ike karịa. Ọ bụrụ na ịmaghị iwu nke ụwa a, ị ga-apụ na windo. Ọ bụrụ na ijiri njikarịcha SEO, azụmahịa gị ga-arụ ọrụ dị ka elekere. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ụlọ ọrụ, nyocha nke azụmaahịa, ma ọ bụ ọkachamara na ahịa, ị nwere ike ịmasị ịmụ gbasara ụzọ ọhụrụ maka iji ngwá ọrụ weebụ dị irè. Makingdị ịkpata ego ọ bụla, ọ bụrụ na ọ dabara n'iwu, enwere ike iwusi ya ike, kwalite ma zụlite ma ọ bụrụ na ịmara iwu nke oghere mebere.
Enwere m ike ịkwalite azụmahịa n'ịntanetị n'onwe m?
Have nụla akụkọ banyere ndị bidoro ahịa ntanetị ha site na ọkọ. Ikekwe ụmụ nwoke ndị a nwere obi ụtọ na mberede chọpụtara iwu nkwalite na World Wide Web. Nwere nghọta ma nwekwaa nghọta na ịbawanye ụba na netwọọkụ ahịa e-commerce nke ọma? Kedu ihe onye ọchụnta ego novice kwesịrị ịma? Ebee ka ịchọta mmụọ nsọ maka ọmụmụ nke ọrụ ndị a na-adịghị ahụkebe? N'ịchọ ihe ọmụma, ị na-aga na ngalaba ịntanetị dị iche iche. Ọtụtụ ụdị ozi ga-adakwasị gị. Ga-emikpu n’ime ihe nzuzo dị iche iche, tupu ị nweta ahụmịhe ọ bụla, ị ga-enwe ndakpọ olileanya otu narị ugboro na ohere mepere emepe na ohere ya enweghị oke.
N'ụzọ dị mma, otu a ga - ekwe omume. Nwere ike gụcha akwụkwọ site n'otu oge, were kwụọ ya ụgwọ maka penny mara mma. Kedu ihe ị ga - enweta dịka nke a? Otutu ihe omuma nke achoro itinye na onodu ndi ekwesighi ekwuputa na akwukwo obula. Ọzọkwa, ị ga-echigharịkwuru onye nkuzi gị, onye ga-enye gị azịza doro anya. N'ihi gịnị? Ọ nwere ike ịnọ ebe dị anya site na ọnọdụ. Kedu ihe ị ga-efu? Are ga-atụfu ụbọchị na ọnwa dị oké ọnụ ahịa. Nke a bụ oge nke ohere ị na-efu. N'ihi gịnị? A ga-etinye niche azụmahịa gị, ị ga - achọ echiche na ohere ọhụụ. You dịla njikere maka atụmanya ahụ?
Ngwaọrụ ntanetị maka ihe ịga nke ọma
Ndị na-azụ ahịa na-elele ụlọ ahịa n'ịntanetị maka ụdị ịzụ ahịa ha nwere na ụwa n'ezie. Ha choro uzo mmadu ha ghari ya na uche ya. Ma na ị nweghị ike ijere ndị ọbịa niile na ụlọ ahịa ahịa gị ahịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha na-abịa n'otu oge. Ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta ntụkwasị obi ndị ahịa n'ụzọ eke, a ga-eleghara aghụghọ ahịa dị ukwuu anya. Ọ bụ ya mere onye ọchụnta ego n'ịntanetị chọrọ ndị nwere ahụmahụ ga-eji elekọta mmadụ, yana ngwaọrụ nchịkwa dị irè.
Na agbanyeghị ntụzi aka nke azụmahịa gị, ị ga-achọ ezigbo ngwaọrụ SEO yana ndị ọkachamara ga-enyere aka na-azụ ahịa gị. Evenzụta ọbụna ihe kachasị dị na ịntanetị adịghị mfe dịka o siri dị na nlele mbụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị ga-ere otu shọvelụ ma ọ bụ otu mmemme, ị ga-eme ya n'oge na-adịghị anya. Mana anyị na-ekwu ugbu a banyere ahịa mgbe niile ma na-eto, nke ị kwesịrị inweta uru asọmpi na nkwado ndị ahịa zuru oke.
Site na iji uzo uzo na uzo nweta ihe ntaneti, ngwanrọ nke mbu na-ekere oke di egwu na mmepe azụmaahịa. Ihe ịga nke ọma na-abịawanye na ụlọ ọrụ na-emepe emepe na-emepe emepe, na mmalite ịmalite uru dị egwu. Ndị ahịa nwere ike na-agagharị n’ọhịa ogologo oge. Mustkwesịrị ịdị njikere maka ọtụtụ puku mmadụ na-achọ ịmata ihe na-agafe. Mmadu nwere ike ime ka onye ahia ya nwee mmasi banyere ndu ya na ubochi ya. Uche a maka njikọta ika a chọrọ usoro ịzụ ahịa na ntinye aka gị. Ekwesịrị iji nwayọ zụọ ndị ahịa, na-azụlite ntụkwasị obi ha na ụdị gị.
Zute Ọrụ ntanetị Semalt
Ngwá ọrụ dị n'ịntanetị dị n'elu ga-adọta ndị ahịa ọhụrụ ma nwekwuo ego ị ga-enweta. Ọnụ ọgụgụ ha buru ibu karị, mana ha niile anaghị agabiga ókèala mpaghara ekenyela. Agencylọ Ọrụ Dijitalụ anyị na-enye ndị ahịa ya ọ bụghị naanị ngwaọrụ ndị ahịa dị irè, kamakwa atụmatụ ga-enyere gị aka ịbawanye ike nke igwe nyocha. Ọ bụrụ na ịchọrọ isi na mpaghara gị, steeti gị, obodo gị, ma ọ bụ kọntinenti gị pụọ, ịnwere ngwaọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Jiri ya wee bụrụ ama ama n’ụwa niile.
Semalt ga - eduga gị n'okporo ụzọ nzuzo nke inyocha ọchụchọ, na-ahọpụta isiokwu ndị metụtara ọrụ azụmahịa gị ozugbo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya, ị ga-enweta data niile achọrọ maka ụlọ ọrụ ahụ dum, arụmọrụ nke asọmpi, na aha ọma. Will ga-enwe ike ilele ọganihu na netwọkụ mmekọrịta, na-abawanye ọnụnọ gị kwa nkeji.
SEO agaghị echefu mkpa ọ dị na narị afọ nke iri abụọ na otu. Ọ bụ ihe gbasara irere nje na njirimara gị ga - enweta site na ngwa nchọta. Semalt ga - enyere gị aka ịkwụsi ike. Obere itinye ego na itinye aka na ndị ọkachamara anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ga-arụpụta ihe dị egwu. Enwere ike wepu mmejọ azụmahịa gị n'usoro. Failfọdụ ọdịda ga-ekwe omume, mana usoro a haziri nke ọma nwere ike iguzogide nrụgide ahịa. Họrọ atụmatụ dabara na ahịa gị wee gaa maka ya.
Eburu ụzọ gosipụta ọdịdị Semalt site na mmepe nke Ntanetị. Insbụrụ mara mma abụghị ihe a na - ahụkarị, mana ọ bụrụ na ha nọ n'otu otu, ọrụ ebube na - eme. Ọrụ ebube ahụ mere na 2013 mgbe ọtụtụ ndị maara ihe n'ezie kpebiri isonyere ndị agha na ịmepụta Semalt. Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ ya gburugburu ụwa. Taa, umuaka na umu odi nkpa ekwesighi iga ebe ozo iji gosiputa omimi ha. Onye obula n’ime ha n’azu ihe omuma ya na ikike ya n’ime oru IT.
Iji chọpụta azụmaahịa gị, ịkwesighi iguzo n'ahịrị. Ọ dịghị mkpa ịlaghachite wiil ahụ iji nye gị ọgwụgwọ. Iji banye na nsonaazụ Google kachasị elu, ịkwesịrị ịkpọtụrụ ndị ọkachamara Semalt. Anyị nwere ọgwụ ga-enyere aka na uto gị. Usoro ọgwụgwọ anyị na-arụ ọrụ, agbanyeghị mba, steeti ma ọ bụ kọntinenti. Want chọrọ ka smartphone gị nata oku n’aka ndị ahịa n’iru? Want chọrọ ka email gị jupụta kwa ụbọchị site na narị narị email na-agụbeghị? You chọrọ iweli ọkwa nke ụlọ ọrụ gị na akara kachasị elu? Want chọrọ ịbawanye ego ị na-akpata site na abụọ, atọ, na ndị ọzọ? Ihe niile dị nfe. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịzụlite azụmaahịa gị, gaa n'ihu gụọ akụkọ a.
Ndị ahịa sitere n'ọtụtụ mba n'ụwa niile na-eji Semalt SEO rụọ ọrụ. Speak na-asụ bekee? Ndị ọrụ anyị ga-asụ asụsụ obodo gị. Na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ, ị ga - amata nke ọ bụla. Enwere nyocha nke ndị ahịa nwere ekele. Akụkọ ndị a abụghị akụkọ echepụtara na-enweghị ntọala na ụwa a na-ahụ anya. Gị onwe gị nwere ike ịga na saịtị nke ụlọ ọrụ na-aga nke ọma nke Semalt nyeere aka ịba ọgaranya:
Ọrụ MAKA ROYAL (Center Service Apple). Ukrainianlọ ọrụ Ukraine a jiri ohere Semalt FullSEO ma mụbaa okporo ụzọ ya site na ugboro anọ na ọnwa 10!
Zaodrasle.si. Slọ ahịa mmekọahụ Slovenian n'ịntanetị na-enye ngwaahịa na ọrụ kemgbe afọ isii. Ruo ọnwa iri nke imekọ ihe ọnụ na Semalt, saịtị a mụbara okporo ụzọ ọchụchọ organic site na 520%, ma meekwa ka ọnụ ọgụgụ nleta maka ọnwa ọ bụla site na 1216. Taa, Zaodrasle.si bụ ụlọ ọrụ kachasị na Slovenia n'ọhịa ya.
Portal maka ịchọ na ịzụta aha franchises. SEO Will Frankling na-ekwu na ngwugwu FullSEO enyerela aka azụmaahịa ya iji bulie ọnụ ọgụgụ isi okwu na Google TOP-10 ruo 5782, na okporo ụzọ sitere na 303% maka ọnwa 9 mbụ. Taa, ụlọ ọrụ a bụ otu n'ime ebe mbụ na ụlọ ọrụ franchise na United Kingdom.
Kedu ihe anyị na-enye?
Onye ọrụ ntanetị ọ bụla maara ihe igwe nchọta bụ. N'ezie i jiri otu n’ime ha. Taa enwere ọtụtụ n'ime ha, mana Google bụ ihe kachasị ewu ewu. Kedu ka onye inyocha ihe si arụ ọrụ? I tinye arịrịọ ma nweta ndepụta nke saịtị Google, Rambler, ma ọ bụ Yandex chọtara. Rịba ama na ụfọdụ saịtị na-ada na mbụ, ebe ụfọdụ na-anọkwa n'azụ. Dika ogugu onu ogugu gosiputara, onu ogugu nke ndi oru na-emeghe nani njikọ ndi di na onodu mbu. Iji banye n’ime TOP-10, ikwesiri imepụta otu usoro iji bulie ọnọdụ saịtị ahụ na Google-index maka ajụjụ ndị a rụburu ọrụ.
Na-etinye aka na ngwaọrụ SEO
Ndị ọrụ injin Semalt maara otu esi etinye saịtị ahụ n'ọnọdụ mbụ na Google TOP 10. Anyị ga-abawanye okporo ụzọ na ahịa ịntanetị. Nkwalite Internetntanetị nwere ike ịdị irè nye ụlọ ọrụ niile ndị nwere ike ị na-ege ntị na-achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ yiri ya na Internetntanetị. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ntanetị na-abawanye kwa afọ. Taa, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị bi n'ụwa na-eji Internetntanetị. Kedu ihe kpatara ndị na-ege ntị a ji amasị gị maka azụmahịa gị? Ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ. Ọtụtụ iri puku na narị puku ndị ọrụ kwa ụbọchị na-achọ ngwongwo gị mana ha na-achọta ngwongwo ndị asọmpi. Nke a bụ n'ihi na ndị asọmpi dị irè ewerelarị ebe kachasị mma na nsonaazụ ọchụchọ. I nwekwara ike were ebe ndị a na anwụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịmalite njikarịcha igwe nyocha weebụ.
Na mpempe dị nkenke ma dị mfe, anyị ga-akọwara ndị ọbịa ihe ị na-eme. Vidiyo nkwado maka azụmahịa gị ga - enyere aka ịdọta ndị ahịa ọhụrụ ma nwekwuo ntụgharị.
Nyochaa saịtị azụmahịa
N'ihe dị ugbu a, ozi bụ ọbara nke azụmaahịa. Enweghị ya na-eduga n'ọbara. Iji mara mgbe niile ma na-achịkwa azụmaahịa gị, jiri data nyocha ebumnuche anyị, ma buru amụma banyere ọganihu gị. Ejikwa azụmahịa gị n'ịntanetị na ndị ọkachamara Semalt!
Ihe karịrị puku ndị ahịa atọ nwere ike ịmasị ịzụta ngwaahịa gị. Gịnị kpatara na ha enweghị ike ime nke a? Ọtụtụ nde ndị nwere ike ịlụ ọgụ anaghị ekwe ka ị banye Google Top. Zụlite azụmaahịa ahụ n'ọkwa dị elu! Choputa uzo ahia ohuru ma merie mpi! Olee otú ime ya? Họrọ ezigbo ndị ọkachamara nwere ahụmịhe buru ibu. Bụrụ onye ahịa Semalt taa! Dịka onye ahịa, ị ga-enweta ngwugwu ọrụ zuru ezu, nke gụnyere mmepe, imezigharị, na ịkwalite ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, yana nkwado ọrụaka ọkachamara. Site na ịhọrọ Semalt, ịnwere ike ịme azụmahịa nke gị n'ịntanetị ma dị mfe nke mbụ.
Ndi okacha mara amara choro imekota gi na obodo obula n’uwa, n’aho n’iile, n’oge obula. Ndị a ga-enwe ike ịghọta nkọwapụta ụdị azụmahịa ọ bụla.
Pọtụfoliyo Semalt gụnyere ihe karịrị 800,000 ikpe dechara maka ndị ahịa karịrị 300,000. Ọrụ niile dị na akụ anyị.
Ego pere mpe na ọganihu nke ọrụ gị na ezigbo nsonaazụ.
Anyị na-eju ndị ahịa anyị anya na ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa bara uru na-enye.
Gịnị bụ njikarịcha igwe na-achọ ihe?
Azụmahịa ahụ ga-anọ n'okpuru nchịkwa nke onye njikwa onwe ya yana ndị otu SEO. Anyị ga-enyocha saịtị gị maka nzacha Google wee zụlite usoro na-esochi. Tinyere ihe ndị ọzọ, ndị ọkachamara Semalt ga - ahọrọ mkpụrụokwu kachasị nke ga - adọta ndị na - ege ntị lekwasịrị anya. Anyị ga-enyocha nhazi nke saịtị ahụ na nkesa mkpụrụokwu, yana họrọ peeji maka nkwalite nkebi ahịrịokwu ndị ga-esote. Ọ dị mkpa ịnakọta ozi gbasara ndị iro gị iji zute ha nke ọma.
Etu esi ebido nweta ihe ịntanetị?
Iji jiri ụlọ ahịa dị n'ịntanetị karie ndị iro, ị ga-ekpochapụ ihe mgbochi ndị na-egbochi ịkwalite. Anyị na-enye usoro nke ga - etinye gị n'ọnọdụ mbụ:
iji mepụta meta meta na-ekwu okwu na isi okwu;
iji melite koodu HTML;
imepụta akara na njirimara na ụkpụrụ nke oge a nke inyocha ọchụchọ ga-ezute.
Ihe njikarịcha pụtakwara imechi njikọ ndị mebiri emebi na ịmepụta uru kachasị nke njikọ akụ sitere na nkwado. Na-edezi faịlụ robots.txt na .htaccess ga-eme ka ọhụhụ nke saịtị gị dịkwuo elu na ọkwa ọchụchọ engine.
Ọtụtụ okwu na ọtụtụ okwu buru ibu, nri? Mee ka ị ghara inwe ọgba aghara na isi ọwụwa, anyị anaghị edepụta ebe a usoro "ọgwụgwọ" niile. Ugbu a, ị hụla otú o si esi ike ibute ụzọ n'ịzụ ahịa na ewu ewu na World Wide Web. Nkwalite SEO chọrọ n'ezie ihe ọmụma pụrụ iche ma dabere na ahụmịhe nke ọrụ ndị mbụ. Otu ndi otu ndi ntorobịa, ndi nwere ezi uche, na ndi ihe ịga nke oma di njikere inyere gi aka. Ọnụ anyị ga-ebido mgbasa ozi SEO dị irè ma mee ka azụmaahịa gị hụ ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa. Ihe ịga nke ọma kwere omume. Luck na-anakpo ndị ọkachamara. Ndị otu Semalt ga-abụ engine gị dị ike n'okporo ụzọ nke ama ama na ịba ọgaranya ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nwere ike ibi ebe ọ bụla n'ụwa ma na-asụ asụsụ ọ bụla. Nwere ike ịrụzi akụrụngwa Apple na Minsk ma ọ bụ ree ụlọ ala na USA. Anyị ga - achọta azịza maka azụmahịa gị ma kwalite ebe nrụọrụ weebụ gị. Anyị maara otu esi arụ ọrụ n'ihi na anyị bụ ndị isi. Na-echekwa banyere azụmahịa nke gị ka anyị kwalite ya. Anyị niile ga-arụ ọrụ karịa!